Yeyiphi eyona nto ixhalabisa kakhulu kwindawo yangaphandle yekherothi?
ngu admin nge-20-04-01
IBarbecue yenye yeendlela ezithandwayo zabantu zepati kunye nokuzonwabisa. Abantu banokwakha ibarbecue yangaphandle eyadini yabo okanye babeke ikhabhathi yangaphandle endle. Kodwa ukucwangcisa i-barbecue efanelekileyo yangaphandle, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe. Kufuneka ujonge ulwazi lwemozulu ...
Zithini izibonelelo zezitulo zolwandle?
Ngaphandle kwezitulo zolwandle, abantu bangakonwabela njani ukukhanya kwelanga kunye elunxwemeni? Ukubonelela ngemvakalelo yokuthuthuzela, uyilo lwesitulo saselwandle lusekwe kumgaqo-siseko wokuhambelana nengqini yomzimba womntu kunye nezinto ezizezakhe, ikwagxininisa ukugcwala kwesakhiwo siphela kunye nokuhamba oku ...
Zeziphi iimaski ezikhoyo ngoku ezichasene ne-coronavirus
1.Imaski ezisebenzayo ezinokuphikisana nenoveli coronavirus Elahliweyo 3 Isakheli esingalukwanga kobuso be Mask: Inganceda ukubonelela ngokhuseleko inxenye yosulelo lokuphefumla ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kodwa ayinakho ukuthintela inkungu okanye umsi. Imaski yobuso eqinisekisiweyo yeN95: ayinakunceda kuphela ukubonelela ngokhuseleko ku ...